नगरपालिकाको चौतर्फी विकासको लागी अहोरात्र खटिरहेका छौ : बहुदरमाई नगर प्रमुख नितेन्द्र साह
पर्सामा ११ वर्षिय बालिकामाथि बलत्कारको प्रयास, आरोपि पक्राउ
संरक्षणको पर्खाईमा घडिअर्वा पोखरी
विद्यालयको शौचालय कहिले होला त सफा ?
भोजपुरी लोकजीवनको भोजन
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जनअपेक्षा अनुसार आफू अगाडी बढ्ने संकेत गरेका छन् । गणतान्त्रिक नेपालका राजनीतिक दलहरुको काम गराईले उनलाई बल मिलेको हो ?
सानो पाइलाले सामाजिक दायित्व तर्फ ग¥यो सहयोग
आरोपमुक्त को नै छ र ! हाम्रो नगरपालिकामा कमिसनको कुरा छैन् ।
आश्विन ३०, २०७७ बलिराम यादव
शिक्षा, स्वास्थय, रोजगार लगायतमा आफ्नो निती नियम बनाई कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार स्थानीय तहले पाएका छन् । तर यसको सदुपयोग भएको देखिदैन् । स्थानीय सरकार आएको झण्डै तीन वर्ष वित्न लाग्दा जनताले समग्र विकासको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । जनताको आरोप अहिले पालिकामा हुने कमिशन र कायकर्ता पाल्ने कार्य व्यप्त छ । शिक्षा, स्वास्थय, रोजगार लगायत अन्य क्षेत्रलाई लांभावित हुने गरी विकास निर्माणको कार्य नभएको पर्सा जिल्लाको एक नगरपालिका बहुदरमाईमा समेत जन गुनासो बढ्दो छ । जनताको यही गुनासोलाई समेटेर बहुदरमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख नितेन्द्र साहसंग मध्य नेपालको लागी गरिएको कुराकानीः
१) यहाँको नगरपालिकामा जनचाहना अनुसार विकास निर्माणको काम भएन भनेर व्यपत जनगुनासो छ, बजेट खर्च नभएर पनी वर्षेनी बजेट फ्रिज हुदै गईरहेको छ । यहाँले जनचाहना अनुसार काम गर्न नसक्नुको कारण के होला ?
पर्साको अन्य सबै पालिकाको तुलना बहुदरमाई नगरपालिकाको काम जनमुखी र गतिशिल भएको छ । गतवर्षको नगरपरिषद्बाट छुटाईएको बजेट अनुसार सबै काम भएको छ । यसवर्ष कोरोना महामारीको कारण केही ठाउँमा अफ्ठयारो भएको हो । तर काम गर्न नसकेको आरोप सत्य होईन । निरन्तर रुपमा काम भई नै रहेको छ ।
हाम्रो नगरपालिका भएपनि सबै गाउँ ग्रामिण भेग मै पर्छ । यहाँ कुनैपनि विकास निर्माणको काम भएको थिएन् । जिरोबाट सुरु गरेर आज हामी यहाँसम्म ल्याएका छौँ । किलोमिटरको हिसाबले सडकलाई ढलान गरि बाटो बनाएका छौँ । ५÷५ करोडको योजना भएको काम पनि निरन्तर रुपमा भई नै रहेको छ । यसर्थः काम गर्ने क्षमता नभएको होईन, काम गर्ने इच्छाले नै गाउँगाउँ र टोलटोलमा काम हुदैछ । अन्य पालिकाको तुलनामा बहुदरमाई नपामा बढि विकास निर्माणको काम भएको यहाँका जनताले महसुस गरि नै रहेका छन् ।
२) विकासको समग्र क्षेत्रलाई नसमेटि कमिशन आउने योजनालाई मात्रै बाढावा दिनु भएको आरोप भन्ने आरोप पनी यहाँलाई बारम्बार लाग्ने गरेको छ नी ?
जति इमान्दारी पुर्वक काम गरेपनि हामी भएको पदमा आरोप आई नै रहन्छ । र यस्ता आरोपबाट मतलब पनी छैन् । मैले गरिरहेको कामबाट मतलब हो । रहयो पैसा वा कमिशनको कुरा, वडाको वडा स्तरीय र नगरको नगरस्तरीय बजेटमा बनेको उपभोक्ता समितिले कसरी काम गरिरहेका छन् त्यो वास्तरविकता बुझे हुन्छ । हामीले कार्य सम्पादन गर्दा टोलटोलबाट आएको योजनालाई संचालन गर्दा नेपाल सरकारले दिएको नियम, कानुन संगत नै कार्य सम्पदान गरिरहेका छौँ । सुरुका वर्षमा पनि हामीले टेन्डर गरेर नै काम गराएका थियौँ । यस वर्ष पनि ५÷५ करोडको योजना टेन्डर मै छ । यस्ता टेन्डरमा भएको पं्रकृयालाई पक्कै पनि तपाईले बुझ्नु नै भएको होला कि यो कमिश्नको खेल हो कि विकासको ! त्यसकारण मैले भन्नु भन्दा पनि जनताले देखेको विकासको गतिले नै प्रष्ट हुन्छ । हाम्रो पालिकामा कतिको कमिशनको खेल छ ।
३) जती ठुलठुला गफ दिएपनी केही ठाउँमा सडक र नाला बाहेक अरु खासै काम नभएको आरोप यहाँकै टोलवासीको छ ?
यहाँले हाम्रो नगरपालिका अनुगमन गरे सबै कार्य छर्लङ्ग हुन्छ । विकास निर्माणको कार्यको लागी जन गुनासो आउनु ठिकै कुरा हो । तर कोरोना महामारीकै बेलाको काम हेर्नुस न । गरिब तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गरि खाने परिवारलाई राहत बाँडेकै हाँै । पालिकामा संक्रमित भएका व्यक्तिहरुलाई आईसोलेसन बनाई खाने बस्ने देखी उपचारसम्मको यति न राम्रो व्यवस्था ग¥यौ कि जिल्ला विपत व्यवस्थापनका संयोजक एंव प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, शसस्त्र प्रहरी प्रमुख आईसोलेसन हेरी सराहना पनि गर्नभयो । यस्तै अन्य सबै क्षेत्रलाई समेटने गरी नगरपालिकाको चौतर्फी विकासको लागी रातदिन खटिरहेका छौ्र ।
४) यहाँको पालीकामा बेरोजगारलाई रोजगार बनाउन के–के योजना ल्याएर कार्यन्वयन गरि सक्नु भएको छ नी ?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम योजनालाई निरन्तरता दिदै धेरै बेरोजगारलाई रोजगार पनि दिएका थियौ । नगरपालिकामा भएको ऐलानी वा पर्ती जग्गालाई निकाली त्यसमा बृक्षारोपण लगायत अन्य विभिन्न कृषि कर्म गरि बेरोजगारलाई त्यसैमा रोजगार दिने योजना हाम्रो छ । बृक्षारोपनबाट उम्रिएका बिरुवाले नगरपालिका पनि हराभरा त्यसलाई संरक्षण गर्न लगाईने बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार पनि हुन्छन् त्यस हिसाबले पनी हामीले रोजगारी श्रृजना गरेका छौँ । यसका साथै वृक्षरोपनले नगरपालिकाको ठुलो सम्पती पनि हुन्छ ।
५) त्यो बेरोजगार कार्यक्रममा आफ्नै कार्यकर्ता भर्ति गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग भएको हल्ला बढी भएको छैन् त ?
काम गरेका मजदुरहरुको नमावली र तीनिहरुलाई दिएको भुक्तानीको डाटा छ । त्यसमा को पार्टीको कार्यकर्ता हो भने कुरा त जानकारी भईहाल्छ नी । त्यो डाटा निकालेर हेर्नुस् न । योजना तहत नै बेरोजगार मजदुरसंग काम गराएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाईएको हो । यो हाम्रो विपक्षीले भन्ने गरेको भनाई मात्रै हो, गराई अर्काै छ । नपत्याए नगरपालिकाको योजना फाटबाट डाटा निकालेर हेर्न सक्नुहुन्छ ।
६) शिक्षा, स्वास्थय र रोजगार क्षेत्रमा यहाँले गरेको कार्यको प्रतिफल कस्तो आएको छ नी ?
पालिकामा भएको अव्यवस्थित स्वास्थय चौकीलाई व्यवस्थित गर्दै जनताको उपचारको लागी आवश्यक पर्ने औषधी र पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरेका छौँ र गर्दै पनि छौँ । वडामा भएका प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा हप्ता÷हप्ता दिनमा स्वास्थय परीक्षण गर्ने काम गरिरहेका छौँ । प्रत्येक वर्ष पालिकाका ६÷७ सय आँखाको बिरामीहरुको निःशुल्क उपचार गराईरहेका छौं । त्यस्तै विद्यालयहरुमा कक्षाकोठाको अभाव थियो त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै कम्पयुटर र अंग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठनको व्यवस्था गराएका छौँ । मितिव्ययी र गुणस्तरीय वातावरणमा पठनपाठनको लागी आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरि योग्य र अनुभवी शिक्षकको समेत व्यवस्था गरेका छौँ । दरबन्दी खाली भएको विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न पुनः नयाँ दरबन्दी खोल्न नगरपालिकाको शिक्षा समितिले पनि निर्णय गरिसकेको छ । प्राय कामहरु पाईप लाईन मै छ, सकेको जति गरिरहेका छौँ ।
७) यस नगरपालिकामा किसानलाई लाभांवित गर्ने गरि लगानी अनुसारको उत्पादनमा बढावा दिन यहाँहरु किन चुक्नु भएको हो ?
नगदे बालीको रुपमा उत्पादन गरिने तरकारी खेतीको लागी किसानलाई प्रत्येक वडामा उन्नत जातका बिउबिजन नगरपालिकाबाटै दिएका छौं । त्यस्तै बालीमा लाग्ने रोग र किराबाट बचाउन छर्किने औषधीको लागी स्प्रे टंकी पनि वितरण गराएका छौँ । नगरपालिका अन्तर्गत खेती हुने प्रायः सबै ठाउँमा बोरिङ्ग जडान गराएका छौँ ।
कुन माटोमा कुन खेती कसरी गर्ने, कसरी बाली उब्जाउ र लाभादायी हुन्छ भन्ने बारेमा कृषि बिज्ञ कहाँ लगी माटो परीक्षण गराई त्यसै अनुसारको आवश्यक स्रोत साधन उपल्बध गराउने काम भएको छ । त्यस्तै पर्ती तथा बाझो खेतीमा खेती गर्न विभिन्न सिपमुल्क तालिम पनि संचालन गरिएको छ । बेमौषमी खेती गर्न किसानलाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराई किसानको आय आर्जनमा बृद्धि गर्ने दिशामा हामी एक कदम अगाडी नै छौँ । कृषि प्रधान देशमा भर्खरै यन्त्रहरु भित्रिदै छ, सयौँ असन्तुष्टिलाई सन्तुष्ट पार्ने काममा हामी निरन्तर खटिरहेकै छौँ ।
८) लकडाउनको बेला किसानको उत्पादित तरकारी विक्रि वितरण नभएर खेतमै कुहिने र बाटोमै फाल्ने अवस्था सृजना भएको बेला किसानको संरक्षणका निम्ति नगर प्रमुखको हैसियतले यहाँको भूमिका देखिनु पर्ने थियो तर देखिएन तपाई कृष्ककै छोरो हैन् र ?
यो कहाँको कुरा हो मलाई थाहा छैन् । हाम्रो नगरपालिकाको भौराटार र गम्हिरीया गाउँमा बढि तरकारी खेती हुने गर्दछ । यहाँ त्यसतो भ्यावह अवस्था थिएन । यहाँ विभिन्न ठाउँबाट व्यापारीहरु आएर तरकारी खरिद गरि लगी रहेका हुन्छन् । त्यस्तो क्षति भएको बारेमा हामी कहाँ गुनासो नआएकाले त्यस्तो समस्या आएको हुन सक्छ ।
९) अन्त्यमा बहुदरमाई नगरपालिकाको विकास निर्माणको कार्यलाई कसरी अगाडी बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
सबै क्षेत्रको विकास निर्माण कार्यलाई क्रमबद्ध रुपले अगाडी बढाउँदै विकास निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिएका छौ । पालिकाको सबै वडामा कच्ची र खाल्डोखुल्डो सडक भएकाले सडक ढलान तथा नाला निर्माण भएको छ र बाँकी रहेको ठाउँमा पनि निरन्तर रुपमा सडक तथा नाला बनाउने काम गराई रहेका छौँ ।
शैक्षिक क्षेत्रमा भन्नुपर्दा प्र्रत्येक वडामा भएको विद्यालयलाई स्तरउन्नती गर्नको लागी आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी विभिन्न किसिमका शैक्षिक सामग्रीहरु जुटाउँदै शिक्षालाई अझै वैज्ञानीक ढङ्गले विकास गर्नमा लागेका छौ । त्यस्तै गरिब, धनी सबैले पालिकामा गुणस्तरीय र भरपर्दाे स्वास्थय सेवा पाउँन भन्ने उदेश्यले स्वास्थय क्षेत्रलाई पनि विकास गर्ने गरेका छौ । सकभर सानो तिनो प्रायः सबै रोगको उपचार पालिका मै होस् भन्ने उदेश्यले स्वास्थय क्षेत्रलाई पनि बलियो बनाउनमा लागेका छौ । तसर्थः शिक्षा, स्वास्थय र समाजिक विकासको कार्य गर्दै समाजलाई दुर्गामि विकास र निकास दिने बाटोमा दौडिरहेका छाँै ।
#बहुदरमाई नगर प्रमुख नितेन्द्र साह
शुक्रवार, आश्विन ३०, २०७७, ०६:१०:००
विषादीको बढ्दो प्रयोग : समस्या भयावह
पकाहामैनपुरका अध्यक्ष चौरसियासँग ५ प्रश्न ?
केही प्रगति गर्न आफै अगाडी बढ्नु पर्छ : उद्यमी गजुरेल
पुष १, २०७७ बलिराम यादव
सुन तस्करको जंजाल तोडनमा प्रहरी लागेको छ : प्रहरी उपरिक्षक पन्त चाडपर्वमा प्रहरीको दशैँ जहाँ डिउटि त्यसैंमा रमाईलो
कार्तिक ७, २०७७ बलिराम यादव
पर्सामा ११ वर्षिय बालिकामाथि बलत्कारको प्रयास, आरोपि पक्राउ माघ ११, २०७७